Jireenya Badhaatu – In shaa Allah Ilma namaa daandii qajeelumma,gammachuu fi milkaa'innaa itti akeekudha.
In shaa Allah Ilma namaa daandii qajeelumma,gammachuu fi milkaa'innaa itti akeekudha.
Featured | Posted by sammubani
Barruulee haarawa maxxanfaman torbaan torbaaniin guyyoota sanbattanii argachuuf websaayiti kana daawwachuu dandeessu.
www.sammubani.com Walii dabarsuun haqa walii raabsaa.
Garuu yeroo tokko tokko jidduun cuufamu waan danda’uuf, yeroo mallatoo cuufamu argitan gara websaayiti kanaatti deebi’aa. www.sammubani.wordpress.com
Hiika Dhiyoo Suuraalee Qur’aanaa Afur
Posted on June 11, 2018 by sammubani
Hiika Dhiyoo Suuraalee Gaggabaaboo Qur’aanaa Afur
Asitti “Suuraalee” jechuun fakkii osoo hin ta’in boqonnaalee Qur’aanati. Suuraalee Qur’aana afran suuraalee namoonni baay’een hiika isaanii osoo sirritti hin beekin guyyaa guyyaan dubbisaniidha. Salaata irraa mi’aa akkamii argatu osoo hiika isaanii takkaa beekanii! Ummanni keenya baay’een Arabiffaa waan hin beeknef tarii salphatti hubachuun isaanitti ulfaachu danda’a. Namooni baay’een Ramadaana kana keessa barruu “Zikrii fi Du’aayi salaataa” jettu irra deddeebi’anii dubbisaa akka jiran sassabduun daataa ni agarsiisti. Tarii sababni isaa jecha jechaan hiikun isaan fayyade ta’a laata. Kana hubannoo keessa galchuun kanarratti suuratul Faatihaa fi suuraalee dhumaa sadan itti dabaluun faayda guddaa akka irraa argatan ni abdadha. Kanaafu, hanga danda’ameen hiikni dhyoon suuraalee kanaa asitti dhiyaatani jiru. Dowlod gochuun itti fayyadamu dandeessu.Buusuf linkii tana tuqaa hiika suuralee gaggaababoo
Posted in Beekumsa, Jireenya, Uncategorized	Tagged faatiha, Qur'aana, salaata	Leave a comment
Seensa İimaanaa-kutaa 2
Posted on April 14, 2018 by sammubani
Kutaa darbee keessatti iimaanni maal akka ta’e ilaaluf yaalle turre. Hojiin gaariin kamiyyuu fudhatama argachuu fi mataa isaati gaarii jedhamuuf bu’uura (foundation) irratti gadi dhaabbatu isa barbaachisa. Bu’uurri kuni yoo hin jiraatin, hojiin hanga fedhe gaarii haa fakkaatu Rabbiin biratti fudhatama hin argatu. Bu’uurri kuni yoo jiraate immoo hojiin gaariin hanga feete haa xiqqaattu lafa hin buutu, Rabbiin biratti fudhatama ni argatti. Bu’uura kanaan iimaana jennaan. Gara afaan keenyatti yommuu deebisnu, wanta Rabbii fi Ergamaan Isaa beeksisan dhugoomsu fi dhugaan itti amanuudha. Iimaanni amanti qofa osoo hin ta’in hojiis kan of keessaa qabuudha. Continue reading →
Posted in Qalbii	Leave a comment
Posted on April 12, 2018 by sammubani
Zinaan (sagaagalummaan) hojii fokkuu ta’ee fi miidha hangana hin jedhamne geessudha. Dubartin akka durbummaa fi kabaja dhabdu, sanyiin akka wal dhayuu taasisa. Dubartiin zinaadhaan yoo ulfoofte hangam salphinni ishii akka haguugu tilmaamun nama hin dhibu. Daa’imni kuni yoo dhalate jireenya akkami akka gaggeessu itti haa xinxallinu. Dhibee gadaa kanaa HIV Eedisiin akka saffisaan babal’atuuf balbala kan banu zinaadha. Continue reading →
Posted in Fuudhaa Heeruma	Leave a comment
Posted on April 10, 2018 by sammubani
Gaafii: Rabbiin (subhaanahu wa ta’aala) Qur’aana keessatti, “Dhiirri zinaa raawwate dubarti zinaa raawwatte malee hin fuudhu” jechuun dubbata. Akkasumas, hadiisa, namticha zinaa raawwate haddiin (adabbiin) irratti dhaabbame fi dubartii akka isaa malee dubartii qulqulluu fuudhu irraa dhoowwame dhagahee jira. (Haddi jechuun seera adabbii Islaama namni yakkamaan adabamuudha. Fakkeenyaf, dhirri fi dubartiin hin fuune yoo zinaa (sagaagalummaa) raawwatan si’a dhibba (100) reebamu (garafamu)). Continue reading →
Seensa İimaanaa-Kutaa 1
Posted on April 7, 2018 by sammubani
Akka lugaa Arabiffaatti iimaana jechuun tasdiiq (dhugoomsu) fi dhugaan amanuudha.  Akka shari’aatti immoo imaanni dubbii qalbii fi arrabaa, hojii qalbii fi qaamaa kan of keessatti hammateedha. Dubbii qalbii yommuu jennu wanta Rabbiin beeksise dhugoomsu fi dhugaan itti amanuudha. Fakkeenyaf, Jireenya fi tokkichummaa Rabbitti amanuu, Qiyaamatti amanuu fi kkf. Hojii qalbii yommuu jennu immoo kanneen akka jaallachuu, iklaasa qabaachu (niyyaan Rabbiif ta’uu), obsuu, Rabbiin irratti hirkachuu, galata galchuu, sodaachu fi kkf. Continue reading →
Posted in Jireenya	Leave a comment
Posted on March 31, 2018 by sammubani
Ibiddi waraanaa fi fitnaan sheyxaanaa wantoota lama nageenya addunyaa fi tasgabbii dhuunfaa booressaa fi jeeqaa jiraniidha. Gar-tokkeen addunyaa ibidda waraanatiin yommuu reebamtu gara biraatin immoo fitnaa sheyxaanatiin jeeqamti. Ibiddi waraanaa haaluma beeknuun boombii fi rasaasan namoota fixu fi qabeenya barbadeessu yommuu ta’uu, fitnaan sheyxaanaa immoo bifa lakkaawamee hin dhumne qaba. Sheyxaana jechuun ajaja Gooftaa isaa didee namoota gara badiitti kan waamu jechuudha. Kanaafu, sheyxaana kan ijaan mul’atu fi hin mul’anne jechuun bakka lamatti qoodu dandeenya. Kan ijaan hin mul’anne gosa jinni yoo ta’u, karaa namni hin beeknen namatti dhufuun gara badiitti nama waama. Continue reading →
Posted on March 24, 2018 by sammubani
Guyyaa guyyaan lubbuun ilma namaa ibidda waraanaatin yommuu darbu, takkaa garmalee nama gaddisisa takkaa immoo akka abdii muratanii fi qalbiin gogdu nama taasisa. Dhalli namaa hanga jireenya tana keessa jiraatu waan badaa fi gaariin ni qorama. Rabbiin subhaanahu wa taa’alaa ni jedha: Continue reading →
Posted on March 20, 2018 by sammubani
Jireenya keessatti badiiwwan adda addaatti lixuun yommuu of irraanfatanii fi Rabbii ofii dagatan, dukkanni jireenya hangam akka ulfaatu tilmaamun nama hin dhibu. Hojii fokkataa akka gaaritti, hojii gaarii immoo akka fokkuutti ilaalun yeroo itti machaa’antu jira. Machaa’insa fi gaflaa kana keessaa wantoota nama dammaqsan keessaa duuti isa tokko. Takkaa du’a ofiitin takkaa immoo du’a nama biraatin. Dargaggeessi armaan gadi kunis namoota akkanaa irraa ture. Mee amma seenaa isaa haa hordofnu… Continue reading →
Posted on March 17, 2018 by sammubani
Guyyaa Qiyaamatti dhugaan amanuu fi guyyaa kanaaf hojii gaarii hojjachuu fi hojii badaa irraa fagaachun of qopheessun, jireenya keessatti akka tasgabbaa’anii fi kaayyoo ofii beekan nama taasisa. Kana beektu laata? Yeroo baay’ee jireenyi kan nama nuffisistu fi jibbisiistuuf amantiin Rabbii fi Guyyaa Qiyaamaatti qaban dadhabaa yommuu ta’uudha. Sababni isaas, namni dhugaan Rabbii fi Guyyaa Qiyaamatti yoo amane, wanta gaggaarii ni hojjata hojii badaa irraa immoo ni dheessa. Kuni immoo akka gammaduu fi tasgabbaa’u isa taasisa. Akkasumas, yeroo rakkoo fi balaan namatti bu’an rakkoo cimaa Guyyaa Qiyaama yaadachuun akka obsan nama taasisa. Continue reading →
Posted in Qiyaamaa	Leave a comment
Posted on March 14, 2018 by sammubani
Jireenya keessatti namni hunduu dukkana keessaa bahuun jireenya ifaa fi gammachuu jiraachu barbaada. Namoota kanniin keessaa aktarii fi artistii beekkamaa Morooko “Sa’iid az-Zayyaani “ kan jedhamuudha. Seenaa kana kan ani asitti isiniif dhiyeessuf nama ifa dhabee akkamitti akka ifa argatu, nama dhiphinna keessa jiraatu akkamitti dhiphinna keessaa akka bahuuf karaa itti agarsiisufi. Kanaafu, isin na hordofuuf qophiidhaa? Seenaan nama gammachiisa, nama barsiisa, fakkeenya namaaf ta’a, malaa fi furmaata namatti akeeka. Haa jalqabnu… Continue reading →
Posted in Gootota Seenaa	Leave a comment
Kuusaa Select Month June 2018 April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 December 2017 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014
Ramaddii Select Category Barte Beekumsa Dandeetti Dubartoota Education Family Fuudhaa Heeruma Gootota Seenaa habit Hijab History jaalala Jaalala Jajjabeenya Jireenya Knowledge life love marriage Prophet Muhammad(SAW) Qalbii Qiyaamaa Reflection Uncategorized Xurree… youth
Xurree Milkaa’inna fi Gammachu-Lakk.23
Fuudha/Heeruma Barbaada, Garuu…
Sadarkaalee sharrii sheyxaanaa
Follow Jireenya Badhaatu on WordPress.com